टाउको किन दुःख्छ? यसरी बच्नुहोस् - तितोपाटी
गर्दनदेखि माथि टाउकाको कुनै पनि भागमा महसुस गरिने दुखाईलाई साधारणतया टाउको दुखेको भनिन्छ। मस्तिष्क अर्थात् गिदी समवेदना शून्य हुने हुँदा त्यो दुखे पनि हामीलाई दुखेको महसुस हुँदैन। तर, वरिपरिका संरचनाहरू जस्तैः मस्तिष्कको आवरण, धमनी र मांसपेशीहरू पीडासँग संवेदनशील हुन्छन्। त्यसैले टाउको दुख्नु भनेको तिनै सम्वेदनशील भागहरु दुख्नु हो।
टाउको दुखाई अत्यन्त पीडादायी, मन्द वा टन्किने किसिमको हुन सक्छ र यो टाउकाको एकापट्टि वा दुवैपट्टि तथा अगाडि वा पछाडिको भागमा हुन सक्छ।
टाउको दुख्नु भनेको आफैंमा रोग होइन। कुनै पनि रोगको लक्षण मात्र हो। यो बिभिन्न कारणले हुन्छ। मेडिकल भाषामा भन्ने हो भने प्राथमिक कारण र अन्य कारणले टाउको दुख्छ।
प्राथमिक कारणमा पीडा हुने स्थानहरूको अति सक्रियताबाट हुन्छ र यसमा अन्तर्निहित संरचनागत समस्या हुँदैन। जस्तै माइग्रेनबाट हुने टाउको दुखाई, तनावबाट हुने टाउको दुखाई र टाउकाको एकातिर एक्कासी शुरू हुने दुखाईलाई प्राथमिक कारणमा लिन सकिन्छ।
पानी कम खायो भने पनि टाउको दुख्छ। कुनै पनि कारणले ज्वरो आउन सक्छ। ज्वरो आएको बेलामा धेरैजसो टाउको दुखेको हुन्छ।
तनावले गर्दा टाउको दुखेको (टेन्सन हेडयाक) हुन्छ। यो सामान्यभन्दा सामान्य कारणले पनि दुख्छ। जती जती साँझ पर्दे जान्छ टेन्सन हेडयाक बढ्दै जान्छ। हलुका किसिमले टाउको दुखिराख्छ।
त्यस्तै अर्को टाउको दुखाई कुनै रोगको कारणबाट हुन्छ जसले मस्तिष्क आवरण वा धमनीमा समस्या पैदा गर्छ र टाउको दुखेको अनुभूति गरिन्छ। जस्तो कि मेनिन्जाइटिस, इन्सेफ्लाइटिसबाट हुने टाउको दुखाई। अत्याधिक औषधी सेवन (प्रतिक्रियात्मक प्रभाव) द्वारा हुने टाउको दुखाई र पीडा समेत यसमा पर्छ ।
एकदम भारी हुँदैन तर हल्का किसिमले दुखिराख्छ। यसमा कुनै लक्षण पनि हुँदैन। यो दैनिक कृयाकलापले गर्दा हुन्छ। ग्याष्ट्रिकको कारणले पनि टाउको दुख्छ। उच्च रक्तचापको कारणले पनि टाउको दुख्छ। उच्च रक्तचापको औषधि खानेहरुलाई औषधि नखाएको बेलामा अथवा उच्च रक्तचाप हुन सुरु गर्‍यो भने पनि टाउको दुख्छ।
आँखाको समस्या भयो भने टाउको दुख्छ। कसैले टाढाको हेर्न सक्दैन कसैले नजिकको हेर्न सक्दैन। नजिकको हेर्न खोज्दा स्ट्रेस हुन्छ टाढाको हेर्दा पनि त्यस्तै हुन्छ। यसले गर्दा आँखाको नशाहरु तन्किन्छ। जसले गर्दा टाउको दुख्छ। यसको लागि सामान्य चश्मा लगायो भने ठीक हुन्छ। कतिपय अवस्थामा आँखाको जाँच गराउनुपर्छ।
डिप्रेशनको कारणले पनि टाउको दुख्छ। राति निन्द्रा परेन भने भोलिपल्ट टाउको दुख्छ। यस्तो बेला टाउको भारी हुन्छ। त्यसैले निन्द्रालाई ध्यान दिनुपर्छ । आराम गर्नुपर्छ । आवश्यक मात्रामा निदाउनुपर्छ।
सामान्य रूघा खोकी र पिनासले पनि टाउको दुख्ने समस्या हुन्छ। बढी चिसो भयो भने र बढी गर्मी भयो भने माइग्रेनको कारणले टाउको दुख्छ।
सामान्य रूपको टाउको दुखाइको समय परिवर्तन हुँदै गयो भने चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ । जस्तै, बिहान मात्र दुख्ने टाउको बेलुका पनि दुख्न थाल्यो, कम दुख्ने टाउको बढी दुख्न थाल्यो भने सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
निरन्तर टाउको दुख्ने समस्या छ भने पछि गएर ब्रेनमा पानी जम्ने, ट्युमर पलाउने, रगत जम्ने सम्भावना उमेरअनुसार बढ्दै जान्छ । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, उच्च कोलेस्टेरोल भएका बिरामीले टाउको दुखाइमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
यो स्पस्ट हुन्छ कि टाउको दुखाइ आफैंमा रोग नभई विभिन्न रोगको लक्षण हो। त्यसैले उपचार पनि सोहीअनुसार गरिनुपर्छ। कुनै रोगको लक्षणको रूपमा उब्जिएको टाउको दुखाइ त्यो रोगको उपचारपछि निको हुने हुन्छ।
टाउको धेरै दुखेको भए टाउकाको सीटी स्क्यान वा मस्तिष्कको एम.आर.आई. वा लम्बर पंक्चर (मेरूदण्ड र मस्तिस्क वरिपरि को तरल पदार्थ को परीक्षणका लागि) सँगै शारीरिक परीक्षण र विगतका कुराहरूको जानकारी लिनुपर्छ। विशेषज्ञ (स्नायुविज्ञ, आँखा विशेषज्ञ) कहाँ पठाउनु पर्ने पनि हुन सक्छ।
अन्य रोगका कारण हुने टाउको दुखाईको उपचार सम्बन्धित रोग अनुसार गरिन्छ। जस्तैः ब्याक्टेरीयाबाट हुने मेनिन्जाइटिस र पिनासका लागि एन्टिबायोटिक। उच्च रक्तचापका लागि रक्तचाप नियन्त्रण, मस्तिष्कमा जमेको पीप वा टयूमरका लागि शल्यक्रिया।
कस्तो औषधी खाने
बिरामीले प्राय:जसो औषधि पसलमा गएर दुखाइ कम गर्ने औषधि किनेर खाने गर्छन् । औषधिको नकारात्मक असर तथा कडा प्रभावबारे प्राय:जसो मान्छेलाई थाहा हुँदैन । त्यसैले चिकित्सकको सरसल्लाह अनुसार औषधि खानुपर्छ ।
सामान्य टाउको दुखेको बेला प्यारा सिटामोल खान सकिन्छ। एकदेखि दुई वटा सिटामोल खाएमा केही हुँदैन। एक पटकमा बढीमा दुई वटा खान सकिन्छ। प्रत्येक ६ घण्टामा दुई वटा चक्की खान सकिन्छ। तर यो क्रमलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन। यो सधै खानु हुँदैन। टाउको दुखेको बेला मात्रै खाने हो तर सधै दुखिरह्यो भने चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ।
कहिलेका काही सामान्य कारणले दुख्यो भने मात्रै यस्तो गर्न सकिन्छ। प्यारासिटामोलले कुनै साइड इफेक्ट गर्देन यसले किड्नीलाई पनि असर गर्देन तर यो सधै प्रयोग गर्नु हुँदैन।
सकेसम्म टाउक दुखेको भन्दै ब्रुफीन खानु हुन्न यसले असर गर्छ। यसको प्रयोग गर्दा अलि धेरै ध्यान दिनुपर्छ। ओपोइ ड्रग्स,कोडीनहरु प्रयोग गर्नेले यसलाई छोड्दा पछि समस्या पर्छ।
माइग्रेनको कारणले दुखेको टाउकोको उपचार भने चिकित्सककै निगरानीमा गर्नुपर्छ। माइग्रेनका कारण दुखेको टाउकोका लागि डिप्रेशनको औषधि र छारे रोग लाग्दा प्रयोग हुने औषधी दिइन्छ।
टाउको दुखेको घरेलु उपचार हुँदैन तर जे कारणले टाउको दुखेको हो त्यसको पहिचान गरेर सावधानी अपनायो भने टाउको दुख्न कम हुन्छ।
चिसोको कारणले लागेको रुघा खोकीले टाउको दुखेको हो भने चिसोबाट बच्नुपर्छ। यसको लागि न्यानो कपडा,तातो पानीको प्रयोग गर्नुपर्छ। चिसो खानेकुरा खान भएन। पिनासको कारणले टाउको दुखेको छ भने तातो पानीको बाफ लिने गर्नुपर्छ। थकाई र तनावले टाउको दुखेको बेलामा आराम गर्‍यो भने टाउको दुख्न कम हुन्छ। निन्द्रा नपुगेर टाउको दुखेको छ भने निन्द्रा पुर्‍याउन पर्छ। पानी प्रशस्त मात्रामा पिउनुपर्छ।
चुरोट, रक्सीको प्रयोग गर्नु हुँदैन। धेरै चिया कफी पनि खानु हुँदैन। रातको समयमा चिया/कफी खाएमा यसले निन्द्रा लाग्दैन अनि टाउको दुख्छ।
बिरामीले केले गर्दा टाउको दुखाइ बढेको हो, त्यस्तो खानेकुरा, बानीबेहोरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
बिरामीले भोको बस्नु, व्रत गर्नु तथा घाममा घुम्नुहुँदैन ।
बिरामीले सन्तुलित आहार खानुपर्छ र प्रतिदिन सामान्य व्यायाम गर्नुपर्छ ।
प्रत्येक दिन एउटै समयमा र ६ देखि ८ घण्टासम्म सुत्नुपर्छ ।
बिरामीले कफी, रक्सी, चकलेट, कोकाकोला तथा पनिरको सब्जी इत्यादि खानुहुँदैन ।
इन्टरनल मेडिसिनमा एमडी डाक्टरडा.अनुस्मृति पालसँग सेतोपाटीले गरेको कुराकानीमा आधारित
June 10, 2018 6:44 pm | ट्रेन्डिङ, स्वास्थ्य